12 Astaamood Oo Lagu Garto Hogaamiyaha Wanaagsan - Daryeel Magazine
12 Astaamood Oo Lagu Garto Hogaamiyaha Wanaagsan
Culimmadu waxay tilmaameen, inay cilmi-ahaan adag tahay; in la xaddido astaamaha la rabo inuu hoggaamiyuhu yeesho guud-ahaanba, waxaase cilmi-ahaan la xaqiijiyay ; inuusan hoggaan bulsho aadami ahi qaban karin, Qofka leh Sifooyinka soo socda:-
(a) Qofka shakiga badan ee aan isku kalsoonayn.
(b) Qofka aan bulshaawiga ahayn, goonni-u-socdka ah, dad la dhaqankana lahayn.
(c) Qofka garashadiisu kooban tahay (Maan-gaab). Dadka astaamaha noocaas ah leh, hadday qabtaan xil hoggaamin bulsho, way ku guul-darraysanayaan oo kama midho-dhalin karaan.
(2) Waa inuu jidh iyo maskax-ahaanba bad qabo, si uu karti ugu yeesho xil-gudashadiisa.
(5) Waa inuu doonayo inuu dalka iyo dadkaba wax u qabto, dul-qaad iyo geesinimana muujiyo.
(6) Waa inuu ka dhisan yahay dhinacyada; aqoonta guud, in ku filanna ka yaqaan cilmiga bulshada, diinta, siyaasadda, ugu yaraanna hal luqad oo caalami ah si fiican wax ugu cabbiri karo, si uu adduunka kale ula macaamilo.
(7) Waa inuu leeyahay hal-abuur ,kana dabbaalan karo caqabadaha, maareyntiisuna mid macquul ah tahay.
(11) Waa inuu joogto u horumarin karo xiriirka uu dadka kale, gudaha iyo dibadaha la leeyahay.
Haddii astaamahan badankood laga helo Madaxweynaha ama hogaamiyaha, waayuhuna saacido, dadweynaha iyo xubnaha dawladduna garab-galaan, waxay u badan tahay, inay arrintu noqon karto;” Rag baa ka taliyay, Rabbina waa aqbalay..”
Astaamaha Lagu Garto Ninka Wanaagsan Ee Mustaqbal Doonka Ah Cudurka Dyslexia Oo Qofka Ku Adkeeya Wax-akhriska Astaamaha Lagu Garto Hababka Loo Dabiibi Karo Calaamadaha Lagu Garto Qofka Ku Neceb Sababaha Keena Qawadka Iyo Calaamadaha Lagu Garto